Myanmar Defence Weapons: Myanmar T-72S Main Battle Tank
မြန်မာ့တပ်မတော်သားများ သံချပ်ကာတပ်များတွင် တီ-၇၂ ပင်မတိုက်ပွဲဝင် တင့်ကားများ အကြောင်းလေ့လာနေကြစဉ်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာ့တပ်မတော် သံချပ်ကာတပ်ရင်းများတွင် ရုရှားနိုင်ငံထုတ် တီ-၇၂ များအပြင် ယူကရိန်းနိုင်ငံထုတ် တီ-၇၂အက်စ်များကို အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် သံချပ်ကာတပ်များတွင် အသုံးပြုသော ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားများ အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
Defence myanmar June 8, 2011 at 4:31 PM
စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ...ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှာ ၂၀၁၁ထဲမှာ တရုပ်သင်္ဘောကြီးရောက်လာပြီး တင့်ကားတွေချသွားဘူးတယ် အစီးရေအတော်များတယ် ပြောနေကြတယ်ဗျ အဲဒါဘာအမျိုအစားလည်း အစ်ကိုရေ သိရင်ဖော်ပြပေးပါဦး..။
MM June 10, 2011 at 8:48 PM
ဖြစ်နိုင်တာက အမျိုးအစား-၉၆ ဖြစ်နိုင်တယ်..ဟိုတလောက မြန်မာအရာရှိတွေ တရုပ်နိုင်ငံသွားတော့ တရုပ်က အမျိုးအစား-၉၆တွေကို သေသေချာချာ ပြသွားတယ်လို့ကြားမိတယ်ဗျ.. သတင်းကောင်းဘာဘဲဗျာ..
Comrade June 11, 2011 at 2:10 PM
Type-96 လားဗျ? Type-96 ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ဘဲ Type-69 ဆိုရင်တော့ တော်တော် အောက်နေပီ။ ဒါတောင် ဘင်္ဂလားက Type-96ကို ကိုယ့်အရင် သုံးနေပီ ထင်တယ်။ Third-generation တင့်တွေ ဖြည့်တင်းချင်တာ ဆိုရင်တော့ ရုရှား T-90 ကိုပို သဘောကျတယ်။
ps. blog ကို3columns လုပ်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ကြည့်ကောင်းသားပဲ၊ တခြားစာဖတ်သူတွေရဲ့ အမြင်လည်း နားထောင်ကြည့်လိုက်ဦးပေါ့။
MM June 11, 2011 at 10:15 PM
အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ အမျိုးအစား-၉၆ တွေပါ ဘင်္ဂလားဒေ့က ပြောနေတာဘဲဗျ မသိရသေးပါဘူး..ကျွှန်တော်ကတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်က တီ-၇၂အက်စ်တွေဟာ အမျိုးအစား-၉၆ တွေနှင့် သိပ်ကွာတယ်လို့မမြင်ပါဘူး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း အချို့မှာတော့ အမျိုးအစား-၉၆ကို သဘောကျပါတယ်...တရုပ်လုပ်ဖြစ်ပင်မဲ့ အတော်ကောင်းပါတယ်...။တီ-၉၀ ကိုတော့ မြန်မာ့တပ်မတော် အရာရှိတွေ အိန္ဒိယမှာလေ့လာခဲ့ရဘူးတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျ..တကယ်ဟုတ် မဟုတ်မသေချာပါဘူး...။